घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका फुटबल खेलाडीहरू वेस्टन म्याकेनी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो वेस्टन म्याकेनी जीवनीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन कारहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
यो अमेरिकी फुटबल खेलाडीको संक्षिप्त जीवन कहानी हो। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाइँलाई वेस्टन म्याकेनीको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवन र क्यारियरको प्रगतिको चित्रण सार हो।
वेस्टन म्याकेनीको जीवनी। बाल्यकालदेखि फेम।
हो, सबैलाई मिडफील्ड र रक्षात्मक क्षमताहरुमा उनको बहुमुखी प्रतिभा थाहा छ। यद्यपि केवल थोरैले मात्र उनको जीवनी पढेका छन् जुन अत्यन्त आकर्षक रहेको छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
वेस्टन म्याकेनी बाल्यकाल कहानी:
बायो स्टार्टर्स को लागी, उनको उपनाम केनी हो। वेस्टन म्याकेनीको जन्म अगस्त १ 28 1998। को २ 60 औं दिन अमेरिकाको टेक्सास राज्यको लिटल एल्म शहरमा भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, टीना र आफ्नो बुबा, जोन को जन्म भएको थियो। उनका अभिभावक their० को दशकमा देखा पर्दछन्।
वेस्टन म्याकेनीका आमा बुबालाई भेट्नुहोस्।
वेस्टन म्याकेनी परिवार मूल:
जस्तो तपाईले अवलोकन गर्नु नै पर्दछ, केनी अफ्रो-अमेरिकी हुन्। वास्तवमा, तपाईं आफ्ना बाबुआमाको फोटोहरू अध्ययन गरेर दावीहरू प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, टेक्सन नेटिभ उच्चारण यान्कीका सबै शेडहरू हुन्। तपाईको परिवारको जरा पुष्टि गर्न तपाईलाई अरू के चाहिन्छ?
ऊ टेक्सासको बोनाफाइड मूल हो।
वेस्टन म्याकेनी बढ्दो वर्ष:
जवान केनीले आफ्नो बाल्यावस्थाको पहिलो तीन वर्ष टेक्सासमा आफ्नो दाइ जोन र एक बहिनीको साथ बिताए। म्याकेनी6बर्षको उमेरमा उनका बुबा जर्मनीको कैसरस्लाउटरमा सरेपछि उनका बुबा नजिकैको रामस्टेन एयर बेसमा थिए।
वेस्टन म्याकेनी परिवार पृष्ठभूमि:
हो, तपाईंले मिडफिल्डरका बुवा पढ्नुभयो जो एक अमेरिकी सेवादार थिए। त्यसकारण, म्याकेनीको परिवारले सबै कुरा पत्ता लगाएको थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, म्याकेनीको मध्यम-वर्गको परिवार खराब थियो र उसको बाल्यकाल खुशी थियो।
उसको खुशी बाल्यकाल थियो भन्नेमा कुनै विवाद छैन।
वेस्टन म्याकेनीको लागि कसरी क्यारियर फुटबल शुरू भयो:
यो जर्मनीमा केनीलाई फुटबलको साथ प्रेम भयो र उनी छ वर्षको उमेरमा स्थानीय क्लब एफसी फिनिक्स ओटरबाचका सदस्य भए। चाखलाग्दो कुरा, उनले टीमको लागि पहिलो खेलमा goals गोल बनाए र क्लबको आठ बर्षे उमेरसँगसँगै खेल्न प्रमोट गरे। जसरी युवा फुटबल प्रतिभाले यसलाई बुझे, फुटबल एक रमाईलोको लागि खेल थियो।
उनको परिचय पत्र कस्तो देखिन्थ्यो त्यस समयमा हेर्नुहोस्।
वास्तवमा, उहाँलाई यो खेलको भविष्यमा यूएसएमएनटी शहर नपुगुञ्जेल हुन सक्ने ठूलो प्रभावको बारेमा कहिले थाहा थिएन, मैक्सनीको पोष्टर २०० 2006 मा पोल्याण्डको बिरुद्द मैत्रीका लागि। म्याकेनीका आमा बुबाले लेन्डन डोनोभन र पौराणिक कथाको साथ फोटो खिचेर अवसर प्राप्त गरेको सुनिश्चित गरे। कार्लोस बोकेनेग्रा।
उनले युएसएमएनटी महापुरुष लेन्डन डोनोभन र कार्लोस बोकेनेग्रालाई सानैदेखि भेट्ने अवसर पाएका थिए।
क्यारियर फुटबलमा वेस्टन म्याकेनी शुरुआती वर्ष:
जब केन्नीको परिवार टेक्सास फर्किए, उनले अमेरिकी फुटबलको साथ फुटबलको जग बसाल्ने प्रयास गरे तर केही उपयोग भएन। अन्तत: उनी फुटबलमा केन्द्रित भए र २०० in मा भान्टेन्ट एफसी डलास एकेडेमीमा भर्ना भए। क्लबको उमेरमा उनी यु एस ए युथको राष्ट्रिय टोलीबाट पनि उत्रिएका थिए।
YNT को माध्यमबाट उठ्दो।
म्याकेनीको खेल एफसी डल्लास युवा एकेडेमीमा सम्मान गरिएको थियो, जहाँ उसले सात बर्ष क्लबको सर्वश्रेष्ठ सम्भावनाको रूपमा विकास गरेको थियो। यो सबैको मुकुट पाउनको लागि, क्लबको साथ आफ्नो अन्तिम सिजनको दौडान उनको प्रयासले उनलाई सेन्ट्रल कन्फरेन्स प्लेयर अफ द इयर सम्मान कमायो।
वेस्टन म्याकेनेनी जीवनी - रोड टू फेम स्टोरी:
१ At बर्षमा केनी महत्वपूर्ण क्यारियर निर्णयहरूको चौरमा थिए। एफसी डलास उनीसँग हस्ताक्षर गर्न उत्सुक थिए र उनीसँग भर्जिनिया विश्वविद्यालयबाट पूर्ण कलेज छात्रवृत्ति प्रस्ताव थियो। थप रूपमा, बुन्डेस्लिगा पक्ष सल्चले उसलाई युरोपमा ल्याउन उत्सुक थियो। किशोरी र तिनका आमाबुबालाई शल्चको प्रस्ताव स्वीकार्नु अघि सहमत हुनु अघि उसको लागि सबैभन्दा राम्रो के हो भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो थियो।
“मैले सहि निर्णय लिएँ र मलाई कुनै पछुतो छैन। यद्यपि मलाई FC डल्लास जान अनुमति दिन सजिलो थिएन, तर तपाईंले सोच्नु भयो, के म १० बर्ष पछि हेर्नेछु र इच्छा गर्छु कि म युरोपमा जान सक्थें? साथै, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ यदि तपाइँ यसलाई त्यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ भने, तपाईं MSL मा फर्केर आउन सक्नुहुनेछ र उच्च स्तरमा खेल्न सक्नुहुनेछ। फ्लिप साइडमा, यदि एउटा बच्चाको रूपमा तपाईं MLS मा जानुहोस् र त्यसपछि युरोपमा आउन कोशिस गर्नुभयो भने, तपाईं तयार नहुन सक्नुहुन्छ। ”
फर्केर हेर्दा, हामी विश्वास गर्छौं कि उनले सही छनौट गरे।
वेस्टन म्याकेनी जीवनी - फेम टु फेम कथा:
भाग्यवस, शर्त इनामदायी साबित भयो, किनकि केन्चीले श्ल्चको युवा टीमसँग जीवनको प्रभावशाली सुरुवात गरेका थिए। उनले मे २०, २०१ on मा पहिलो टीमको शुरुआत गरे र आफैलाई टीमको लागि एक बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा स्थापित गरे। वेस्टन म्याकेनीको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यो टुक्रा लेख्न समय अगाडि, मिडफिल्डर जुभेन्टस मा loanण मा छ।
क्लबमा उनी आइपुगेपछि उनले इतिहासका किताबहरूमा प्रवेश गरे जुभेन्टसमा पहिलो अमेरिकी खेलाडी र सेरी एको पाँचौं। ओल्ड लेडी युरोपको शीर्ष क्लबहरू मध्ये एक हो जसको सितारा जस्तै छन् क्रिस्टियानो रोनाल्डो र पलो डाइब्ला। यसमा कुनै श doubt्का छैन कि म्याकेनीले ठेक्का स्थायी बनाउने आफ्नो सम्भावनाहरूलाई कल्पना गर्दछन्। इटालीमा उसको लागि जुनसुकै तरिकाले चीज बाहिर आयो, बाँकी, उनीहरूले भने जस्तो इतिहास हुन्छ।
केनीले टुरिनमा राम्रो समय बिताइरहेको छ, जहाँ उसले उत्तमबाट सिक्छ।
वेस्टन म्याकेनी डेटि is को हो?
केही उत्कृष्ट मिडफिल्डर पछाडि रोमान्टिक भूत हो। तथ्यको रूपमा, हामीले भर्खर बनायौं। जे भए पनि, म्याकेनी गोरा सौन्दर्यको सम्बन्धमा हुने गर्थी। उनको नाम लौरा रीपा हो।
वेस्टन म्याकेनी आफ्नो पूर्व प्रेमिका, Rypa संग।
अलि अप्ठ्यारो जोडी देखिन्छ, तिनीहरू गहिरो प्रेम र अधिक चीजहरू सँगै थिए। जे होस्, तिनीहरू अलग तरीकाले गए र उनीहरू सँगै भएका सम्झनाहरूको इन्स्टाग्राम फोटोहरू मेटाए। मिडफिल्डर स्पष्ट रूपमा अगाडि बढेको छ। जे होस्, ऊ चाँडै नै फन्सीमा फस्ने छैन।
वेस्टन म्याकेनी परिवार जीवन:
केनीको गुणस्तरको मानिस बढाउनको लागि अद्भुत व्यक्तिको सेट लिन्छ। ती व्यक्ति परिवार हुन्। हामी तपाइँलाई वेस्टन म्याकेनी आमा बाबुको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। हामी यहाँ उसका भाइबहिनी र आफन्तको बारे तथ्य पनि उपलब्ध गराउँदछौं।
वेस्टन म्याकेनी फादरको बारेमा:
जोन मिडफिल्डरका बुवाको नाम हो। पहिले पनि भनिएझैं ऊ खास गरी स्टाफ सार्जन्ट सर्भिसम्यान बन्छ। उहाँलाई धन्यवाद, म्याकेनी सेवाकर्मीहरूमा लोकप्रिय छ। यो केन्नीको बुबा जहिले पनि सहयोगी बुबा हुनुहुन्छ भन्ने बिना कहिल्छ। म्याकेनी उसको बुबाको लागि भाग्यमानी हुनुपर्दछ।
हामी उनी ठट्टामा थियौं जब हामीले भन्यौं कि ऊ सेवईमानहरु बीच लोकप्रिय छ।
वेस्टन म्याकेनी आमाको बारेमा:
टीना प्लेयरको आमाको नाम हो। उनीले परिवारमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्दछ जब पतिको पनि आवश्यक हुन्छ। वास्तवमा, यो टीनाले नै जर्मनीमा अलास्का भन्दा छनौट गरेकी थिइन जब उनको पतिले सैन्य स्टेशन पोष्टिंगको विकल्पहरू आइपुगेका थिए। साथै, टीनाले युवा म्याकेनीलाई एफसी फिनिक्स ओटरबाचको परिचय गराए जहाँ उनले फुटबलमा आफ्नो यात्रा शुरू गरे।
वेस्टन म्याकेनी उसको बुवा, आमा, बहिनी र भाइसँग।
वेस्टन म्याकेनी भाई बहनहरूको बारेमा:
फुटबल ताराको दुई जना भाइबहिनी छन्। तिनीहरूमा जेठो भाइ जोन र सानो बहिनी पनि थिए। उसको भाई एक फायर फाइटर हो जसको घर जग्गामा चासो छ। यसका साथै उनकी एउटी छोरी पनि छ। अर्को शीर्षक अन्तर्गत उनको पत्नी र छोरीको नाम हेर्नुहोस्।
वेस्टन म्याकेनीको उसको दाइ जोनसँग एक दुर्लभ तस्बिर।
वेस्टन म्याकेनी नातेदारहरूको बारेमा:
केनीको नजिकको परिवारबाट टाढा, उनीसँग भतीजी छ नाओमी र एक बुहारी, मिमी। तिनीहरू उनको जेठो दाइको छोरी र पत्नी (क्रमशः) हुन्। हामी अझै फुटबल स्टार हजुरबा हजुरआमाको विवरणहरूको लागि हाम्रो अनुरोध प्राप्त गर्न आशावादी छौं। साथै, हामी खेलाडी काका, काकी, काका, भाईबहिनी र आफन्तहरू को हुन् भनेर जान्न उत्सुक छौं।
वेस्टन म्याकेनी निजी जीवन:
केनी एक व्यक्ति हो जसलाई तपाईं साथी हुन मन पराउनुहुन्छ। फुटबल प्रतिभासँग गुणहरू र पारस्परिक सीपहरू हुन्छन् जसले उसलाई साथीहरू समेट्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, उहाँ रमाइलो हुनुहुन्छ, खाना पकाउन मन पराउनुहुन्छ र नयाँ भाषाहरू सिक्नमा गाह्रो समय हुँदैन।
एक आश्चर्यजनक व्यक्तित्व संग फुटबल प्रतिभा को लागी कति लाई मनहरु?
यसका अतिरिक्त उनलाई कडा पार्टी कसरी गर्ने भनेर पनि थाहा छ। ऊ इक्विटीलाई माया गर्छ, अन्यायलाई घृणा गर्छ, र एक पटक उसले लगाएको थियो 'जर्ज जर्ज जर्ज' अरमबन्द दुखद जर्ज फ्लोडलाई सम्मान गर्न। साथै, टेक्सास मूल निवासी आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवन को बारे मा विवरण साझा गर्न कुनै समस्या छैन। यद्यपि उनले थोरै यसो गरे किनभने उदारताको महत्त्व बुझेको छ।
वेस्टन म्याकेनी जीवनशैली:
यो चित्र, तपाईं विश्वको शीर्ष पाँच लीग मध्ये एक खेल्नुहुन्छ, २.2.95 million मिलियन यूरो प्रतिवर्ष कमाउनुहोस्, र एडिडाससँग समर्थन सम्झौता गर्नुहोस्। एलोन मस्कको स्पेस एक्स प्रोजेक्टमा मंगल ग्रहको यात्रा पछाडि तपाईंको क्रयशक्तिलाई के पार गर्न सकिन्छ?
म्याकेनीको संसारमा तपाईंलाई स्वागत छ। ऊ भर्खर २२ वर्षको छ तर उसको सम्पत्ति M मिलियन युरो छ र उसले आफूले चाहेको सबै चीज पाउन सक्छ। कारहरू, घरहरू, तपाईं यसलाई नाम दिनुहुन्छ। उहाँ सबै ती सबै छ। हातमा एक मात्र समस्या यो छ कि ऊसँग आफ्नो धनको आनन्द लिन पर्याप्त समय छैन। फुटबल प्रतिबद्धताको खेल हो र केनीको पिचमा खर्च गर्न र अधिक पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न करीव एक दशक जति भयो।
उनले एडिडासको समर्थन गरेपछि केनीले उसको एउटा कार देखाउँदछ।
वेस्टन म्याकेनी बारे तथ्यहरू:
बधाई, तपाईंले यसलाई टाढा बनाउनु भयो। वेस्टन म्याकेनी बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यस आकर्षक लेख लपेट्नको लागि, यहाँ उनको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनटोल्ड तथ्यहरू छन्।
प्रति वर्ष:: € 2,950,000
प्रति महिना: € 245,833
प्रति हप्ता: € 56,644
प्रति दिन: € 8,092
प्रति घण्टा: € 337
प्रति मिनेट: € 6
प्रति सेकेन्ड: € 0.10
तपाईंले वेस्टन म्याकेनीलाई हेर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले जुभसँग कमाएको हो।
टेक्सास निवासीले हामीलाई अलौकिक अस्तित्व छ कि छैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन् कि छैनन् भन्ने कुरा भने दिन सकेको छैन। यद्यपि, अनौंठो कुरा उसको विश्वासको पक्षमा हो, विशेष गरी एक इसाई।
तपाईंले कहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न कि वेस्टन म्याकेनी कसरी अन्डररेट गरिएको छ तपाईंले आफ्नो फिफा रेटिंग see 76/85 देख्नुहुन्न। आशा छ, अधिकारीहरु यसको बारे मा सचेत छन् र एक upward समीक्षा धेरै आसन्न छ।
अपग्रेड प्रयोगकर्ता नाम हो, धैर्यता पासवर्ड हो।
तथ्य #4- आमाले उसलाई जमिन राख्नुहुन्छ:
जब म्याकेनी पहिलो पटक सल्चलामा सरेका थिए, उनका आमाबाबुले, विशेष गरी उनकी आमाले, उनलाई कडा चेतावनी दिए कि उनले बुन्देस्लिगा उचाई माछा मार्दा फुटबल स्टारबाट कुनै डिवा जस्तो व्यवहार बर्दाश्त गर्ने छैन। यसले आंशिक रूपमा किन म्याकेनी नम्र छ भनेर वर्णन गर्दछ।
“मलाई थाहा छ म को हुँ र कहाँबाट आएको हुँ। साथै, मेरी आमाले मेरो चपहरू बस्ट गर्नुहुनेछ यदि मैले अचानक तारा जस्तै व्यवहार गर्न थाले भने। " उनले एक पटक खुलासा गरे।
Lifebogger को तालिका सारांश फुटबलर को जीवनी पूछताछ मा उत्तरहरु प्रदर्शन गर्दछ।
पूर्ण नामहरू: वेस्टन म्याकेनी।
जन्म मिति: अगस्त १ 28 1998। को नौौं दिन।
जन्मस्थान: अमेरिकाको टेक्सास राज्यको लिटल एल्म शहर।
अभिभावक: जोन र टीना।
Siblings: जोन र एक बहिनी।
फिटमा उचाई: Fe फीट, म ईन्च।
सेमी मा उचाई: 185 सेमी।
कुल मूल्य: M मिलियन यूरो।
वेस्टन म्याकेनीको बाल्यकालको कहानी र जीवनीमा यस जानकारीमूलक अंश पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि को प्रेरणादायक जीवन कहानी जुभेन्टस कोर्टमा टेक्सन सही निर्णय लिनुको महत्त्वमा विश्वास गर्न तपाईंलाई प्रेरित गर्यो।
जसरी वेस्टन म्याकेनीका आमा बुबाले उनलाई राज्यमा अन्य रसदार प्रस्तावहरूको बारेमा युरोपमा सर्ने छनौट गर्न मद्दत गरे। खेलाडीका आमाबुवाको शब्द र व्यवहारमा उसको क्यारियरमा समर्थन गरेकोमा उनीहरूको प्रशंसाको लागि यो मोवाँमा हामी सुन्दर छौं।
Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा टिप्पणी दिनुहोस् राम्रो गर्नुहोस्।